DAAWO: Ahlu Suna oo isku dhiibtay DFS sheegtayna in ay u tanaasusho Shacabka Soomaaliyeed.
GURICEEL(P-TIMES)- Kooxda Ahlu Suna Waljameeca oo ka dhisneyd mudo dheer magaalooyinka Guriceel & Dhuusa-Mareeb, ayaa ugu dambeyn saaka isku dhiibay dawladda Faderaalka Soomaaliya, ka dib markii ay saacadihii lasoo dhaafay dagaalameen labada dhinac.
Sadex kamid ah madaxda Ahlu Suna ayaa la sheegay in ay ku jiraan goob amaan ah oo ay gacanta ku hayso dawladda Faderaalka Soomaaliya, waxayna sheegeen in sidaas loo sameeyey si loo xaqiijiyo ammaankooda.
Sheekh Shaakir oo ah madaxii Xukuumadda Galmudug ee hore oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in dagaal socday saacado ka dib ay u tanaasuleen shacabka deegaanada Galmudug oo ay nabadda qaateen.
Sheekh Shaakir oo horey u diiday wada hadal ay lagalaan dawladda faderaalka, ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan nabadda, isla markaasna ay hubkoodii, ammaankooda iyo wax kasta oo Ahlu Suna hub lahayd kuwareejinayaan Taliyaha 21aad ee ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed.
Kooxda Ahlu Suna ayaa ahayd shabakad diimeed mudo dheer gacanta ku heysay labada magaalo oo ay ka saareen Al- Shabaab, ka dib taageero ay ka helaan Itoobiya sannadihii ay maamuleysay kooxda Tigree-ga, laakiin Ahlu Suna ayaa weyday gargaarkaas oo dhan.
Waa arin wanaagsan oo farxad leh in dagaalka la joojo nabadana la qaato. Md Xaaf is na waa inuu isku dhiibo dawlada si loog fogaado dagaalo kale oo dhaca. markaa ka dib waa in Gaalkacyo hal mid laga dhigaaa oo dawlada federal ka la hoosgeeya. Inataas ka dib Waa in Gobolka mudug oo dhan laysku daro, ilaa Burtinle. New galmudug ta waa inay ka koobnaataa 2 gobol mudug iyo galgaduud oo buuxa.